ဒုံးကျည် အစိတ်အပိုင်းများ ရရန် ဘာလင်ရှိ သံရုံးကို မြောက်ကိုရီးယား အသုံးချနေဟု ဂျာမနီ စွပ်စ? - Yangon Media Group
မြောက်ကိုရီးယားသည် ဒုံးကျည်အစိတ်အပိုင်းများရရှိရန် ဘာလင်မြို့ရှိ ၎င်းတို့၏သံရုံးကို အသုံးချလျက်ရှိသည်ဟု ဂျာမနီ ပြည်တွင်းထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ (BfV) အကြီးအကဲက စွပ်စွဲ ပြောကြားကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်ရိုက်တာသတင်းကဆိုသည်။ ဂျာမနီအခြေစိုက် NDR ရုပ်သံတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်၌ ထုတ်လွှင့်မည့်အင်တာဗျူး၌ BfV အကြီးအကဲ ဟန်းစ်ဂျော့မာအက်ဆင်က ”အဲဒီသံရုံးကနေပြီး အစိတ်အပိုင်းတွေရဖို့လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ကောက်ချက်ချထားတယ်။ အဓိကကတော့ ဒုံးကျည်အစိတ်အပိုင်းတွေပါ။ တစ်ခါတလေမှာတော့ နျူကလီးယား ပစ္စည်းတွေလည်းပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
များသောအားဖြင့် သံရုံးကိုအသုံးချကာ မြောက်ကိုရီးယားရရှိ ခဲ့သည့်ပစ္စည်းများသည် စစ်ဘက်နှင့် အရပ်ဘက်နှစ်ခုစလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟု မာအက်ဆင်က ပြောသည်။ ဂျာမနီအာဏာပိုင်များသည် အဆိုပါလုပ်ရပ်များကို တတ်နိုင်သမျှဟန့်တားကာကွယ်လျက်ရှိ ကြောင်း၊ သို့သော်လုပ်ရပ်တိုင်းကို ထောက်လှမ်းသိရှိကာ ဟန့်တားနိုင်မည်ဟု မိမိတို့ အာမမခံနိုင် ကြောင်း မာအက်ဆင်က ပြောသည်။
ဘာလင်မြို့ရှိ မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးတာဝန်ရှိသူများကမူ တစ်စုံတစ်ရာတုံ့ပြန်မပြောကြား သေးပါ။ မြောက်ကိုရီးယား၏နျူကလီးယားနှင့် ဒုံးကျည်အစီအစဉ်ကို ဟန့်တားရန် အမေရိကန်နှင့် မဟာမိတ်များက ဆန်ရှင်များချမှတ်ထားသည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကလည်း ဆန်ရှင်များချမှတ်ထားသည်။ သို့သော် မြောက်ကိုရီးယားသည် အမေရိကန်ပြည်မကြီးအထိ ရောက်နိုင်သော နျူကလီးယားထိပ် ဖူးတပ်တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည်ရရှိ ရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
ဝေဖန်မှု မရှိလျှင် စာပေရေးသားမှုများ မပြည့်စုံနိုင်သဖြင့် လူငယ်များ ဝေဖန်ရေးစာများ ရေးသားဖ??